Kaamirada Guriga Yi 3, kamarad gudaha oo xariif ah | Wararka IPhone
Yi Home Camera 3, oo ah kaamirad gudaha ku cusub oo caqli badan
Waxaa lagu dhawaaqay CES 2019 ee ugu dambeysay, horaantii sanadkan, kaamirada cusub ee amniga ee Home Home 3 ayaa hadda lagu heli karaa nidaam sirdoon farsamo oo cusub oo kuu ballan qaadaya inuu kula socodsiin doono oo keliya markay tahay, mahadsanid aqoonsigeeda dadka iyo ka fogaanshaha waxyaabaha been abuurka ah ee kamarada noocan ah.
Iyadoo la duubayo 1080p, H264 system riixo, aragti habeen, ogaanshaha ilmaha oo dheer iwm, moodelkan cusub ee Guriga wuxuu yimid si loo sii ballaariyo kaydka kamaradda amniga sumadda, oo waliba wuxuu ku sameeyaa qiime aad u tartan badan. Waanu tijaabinay waana kuu sheegi doonaa hoosta.
1 Sirdoonka macmalka ah ee awooda
2 App wanaagsan, iyo muuqaal fiican
Sirdoonka macmalka ah ee awooda
Kaamirooyinka amniga guriga ayaa ka soo noqday qalab ahaaneed oo aad ka heshay kaliya guryaha "geeks" ugu badnaan inay noqdaan wax aad ugu badan guri kasta. Dad aad u tiro badan ayaa dooranaya inay ku tiirsanaadaan nidaamkooda kormeerka fiidiyowga iyaga oo aan adeegsan qarashyada sare ee bil kasta ay bixiyaan shirkadaha kale ee amniga. Kaamirooyinka amniga ayaa sidoo kale horumarey maantana moodal kasta oo qiimahiisa milixdiisu leedahay wuxuu leeyahay aragti habeennimo iyo tayada FullHD (1080p). Si kastaba ha noqotee Waxaa jira qodobo kaladuwan oo ay tahay in lagu xisaabtamo markaan ka hadlayno kamaradaha amniga guriga: khidmadaha adeegga, suurtagalnimada keydinta deegaanka iyo / ama daruuraha, iyo shaqooyinka horumarsan sida caqliga macmalka ah.
Nooca 'Yi' wuxuu sameeyay go'aan sax ah oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu go'aansado haddii ay doonayaan adeegga daruur oo ay iska bixiyaan (qiimayaashu aad ayey u xiiso badan yihiin), ama haddii waxaad doorbideysaa inaad isticmaasho nidaamka keydinta maxalliga ah adoo isticmaalaya kaararka microSD oo aadan bixin nooc kasta oo khidmad bille ah. Waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho fiidiyowyadaada meel fog illaa intaad internetka ka haysatid iyadoon loo eegin ikhtiyaarka la doortay, oo ay aad u yar yihiin kala duwanaanshaha faa'iidooyinka aad ku hesho adeegga bilaashka ah ama lacag bixinta ah xidhiidhkan)
Dabcan, wax ka muhiimsan nidaamka digniinta digniinta leh ee kugu wargaliya markay run ahaantii lama huraanka tahay. Waxyaabaha been abuurka ah, ee ku soo noqnoqda kaamirooyinka caadiga ah, ayaa aakhirka kuu keenaya inaad iska indhatirto digniin kasta oo laguu soo diro, iyadoo luminaysa dhammaan dareenka dejinta nidaam ilaalin fiidiyoow ah. Waxaa muhiim ah inaysan ka digin maxaa yeelay nal ayaa soo ifbaxay, maxaa yeelay gaari ayaa la dhaafay laydhadhkiisa ama sababtoo ah duqsi ku degay bartilmaameedka. Nidaamka sirdoonka macmalka ah ee kamaradda cusub ee Yi Home ayaa digniinta ka dhigaysa mid dhab ah, kaliya markay dadka ogaato.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kaaga digeysaa marka ay aragto buuq sida cunug oo ooyaya, sidaa darteed xitaa waxaad u isticmaali kartaa kamarad ilaalin qolka jiifka ee yaryar ee guriga ku jira. Ogeysiisyada ayaa ku siinaya marin toos ah digniintaas iyo fiidiyowyo yaryar oo gaagaaban laakiin waxay ku tusayaan waxa dhaca daqiiqada saxda ah ee ay dhacday.
App wanaagsan, iyo muuqaal fiican
Mar alla markii aad rakibto kaamirooyinka, waxa aad maalin walba qabaneyso ayaa noqonaya dalab, cunsur aan munaasabado badan lasiinayn muhiimadda ay mudan tahay, taasna u rogi karta wax soo saar aad u wanaagsan wax aan faa'iido lahayn. Nasiib wanaag kiiskan waxaan haynaa arjiga Yi Home (isku xirka), aad u fududahay in la isticmaalo, oo lagu tarjumay Isbaanish taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku soo ururiso dhammaan kaamirooyinka nooca aad ku dhex leedahay hal barnaamij. Barmaamijka waxaad ku arki kartaa toos, waxaad kula hadli kartaa kuwa dhinaca kale ah ama waxaad arki kartaa digniinaha dhacay siday u kala horreeyaan. Xitaa waad sameyn kartaa si otomaatig ah waqtiyada iyo marka la shaqeynayo. In kabadan hal sano anigoo adeegsanaya kamaradan iyo codsigeyga waxaan kaliya tebayaa hal shey: digniino caqli gal ah oo meesha yaala kana fogaaneysa ogeysiisyada markaan guriga joogo.
Marka laga hadlayo tayada muuqaalka, waxaan heleynaa kamarad u oggolaaneysa ku duub 1080p 20fps kuna soo saar isla tayada ama ka hooseeya haddii aad isticmaaleyso xogta moobiilka. Dabcan waxay u oggolaaneysaa duubista aragtida habeenkii, iyo waxaas oo dhan oo leh xagal daawasho oo ah 107 digrii. Kaamirada waxaa loogu talagalay in lagu dhejiyo shelf kasta oo ay ku mahadsan tahay saldhigeeda, oo waliba magnet ah, sidaa darteed haddii aad rabto waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee bir kasta adigoon isticmaalin dhejis ama boolal. Waxay ku shaqeysaa iyada oo loo adeegsanayo fiilada microUSB iyo xeedho ku jirta sanduuqa, waxayna ku xiran tahay shabakadaada WiFi (2,4GHz) si ay u hesho marin joogto ah oo internetka ah.
Haddii aad raadineyso kamarad ilaalin ah oo leh tayo muuqaal tayo wanaagsan leh habeen iyo maalinba, howlaha sirdoonka sare ee farsamooyinka ah ee u oggolaanaya inay kugu wargeliyaan oo keliya markay arkaan qof ee aysan ahayn xayawaan, iyo sidoo kale inaanay kugu addoomin lacag bille ah Waajibka, kamarad cusub oo 'Home Home' ah waa waxaad raadineyso. Kaamirad wanaagsan oo leh codsi wanaagsan oo runti leh qiime tartan ah: € 49,99 on Amazon (isku xirka)
Kaameradda Guriga 3
FullHD 1080p 20fps iyo aragtida habeenka
Caqli badan, qaab dhismeedka magnetic
Codsi wanaagsan ayaa loo turjumay Isbaanish
Majiro lacag bille ah oo qasab ah
Ma jiro ogeysiisyo caqli-gal ah oo ku saleysan goobtaada
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Yi Home Camera 3, oo ah kaamirad gudaha ku cusub oo caqli badan
Imtixaanada dhabta ah waxay bilaabayaan inay wadaagaan xaalada WhatsApp iyo Facebook
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu xakameeyay suuqa smartwatch ee 2018